Runyararo Rwezvekuchengetedzeka | Germany paTitanic kosi
Ungaita sei kuti vanhu vatore pfungwa dzisiri kufarira? Ungaita sei kuti utaure navo mune izvo zvavanenge vasina? Muchina wekutanga wekufunga izvozvi wave hurongwa hwakakura kwazvo zvekuti hapana angapunyuka. Nhasi, iyo yeruzhinji yakagadzirwa sezvinodiwa uye inobhadharwa munzira dzakawanda. Ndechipi chimwezve chaunogona kutsanangura musiyano uripo pakati pezviitiko zvakawanda nedudziro yavo yunifomu munhau?
Media yezvokwadi - kururamisa
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 5 mwedzi 3 mwedzi
Chikamu chekupa mvumo yekutepfenyura
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 6 mwedzi 18 maawa
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 6 mwedzi 3 mwedzi
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 7 mwedzi 3 mwedzi
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 7 mwedzi 7 mwedzi
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 9 mwedzi 8 mwedzi
Iyo yesainzi inoperekedza kubviswa kwemiganhu, nyika, demokrasi uye chengetedzo uye kumisikidzwa kweEU nzvimbo yenyika uye inoenderana nomenklatura zvidzidzo zviripo izvo zvinowanzoita zvido zveboka rinotonga. Ndiyo nzira iyo sainzi inoshanda nayo nhasi - kunyanya chibvumirano sainzi. Chete kungopa kwakadaro uye kwakabhadharwa sainzi kune ane zvakakomba Read more ...
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 9 mwedzi 3 mwedzi
Ini ndinoziva vevashoma vesainzi vepfungwa vangadai vakapokana pachena nekuparadzwa kweIslam kweGerman. Ruzhinji ruzhinji rwevaenzi vesaenzi vakabatana nekorasi yekugamuchirwa kusvika ikozvino. Vamwe, saHerfried Münkler, vakashandisa zvisina kufanira chinzvimbo chavo semasayendisiti zvakananga nekuda kwenhema. Asi vazhinji vane zvakanakawo Read more ...
Magweta aya, anga achizivikanwa sevadzvanyiriri vakasimukira kubva pamazuva emukurumbira, vanongoisa mubvunzo wakakosha wekuti kupomoka kwevanhu vazhinji kwakarongwa sei pamusoro pezvematongerwo enyika uye nezvese zvinonzwisisika zvido zvevagari zvinogona kutenderwa zviri pamutemo. Icho chinopikisa chinogona kugadziriswa chete kana iko kurudyi kukotamiswa. Read more ...
pamusoro Alexander Brandenburg, zvisati zvaitika 9 mwedzi 5 mwedzi
Cartel of kutongwa